Wargeyska Daily Mail Oo Sheegay Meesha Kaliya Ee Ay Manchester United Xilli Ciyaareedkan Booska KOOWAAD Ka Gashay Kooxaha Premier League. - Gool24.Net
Wargeyska kasoo baxa dalka England ee The Daily Mail ayaa banaanka keenay boos kaliya oo ay kooxda Manchester United kaalinta koowaad kasoo gashay xilli ciyaareedkan kagana fiicnayd dhammaan kooxaha kale ee Premier League.
Man United ayaa soo qaadatay xilli ciyaareed qiimayntiisu tahay musiibo iyo mid hoosaysa waxaana ay baxeen koob la’aan iyaga oo sidoo kale seegay kaalmaha afarta sarre ee horyaalka ee tartanka horyaalada Yurub loogu soo baxo.
Jose Mourinho ayaa Red Devils lasoo bilawday xilli ciyaareedkan dhammaadka ah balse waxa uu shaqadiisa waayay bishii December kaddib liidasho dhinaca natiijooyinka ah iyo xiddigo uu khilaaf kala dhex galay.
Intaa kaddib Manchester ayaa magacawday Ole Gunnar Solskjaer oo markii hore kumeel gaadh ahaa balse gadaal rasmi ka noqday.
Tababaraha ree Norway ayaa farxadii kusoo celiyay Old Trafford bilihii ugu horreeyay iyaga oo qaab farshaxan leh ku gaadhay wareega siddeed dhammaadka Champions League balse toddobaadyadii ugu dambeeyay ayaa markale murugo noqday.
Daily Mail ayaa sheegaya in xilli ciyaareedkaas soo dhammaaday meesha ay Man United No.1 kasoo noqotay ay ahayd iibinta tikidhada kooxdeeda iyada oo xog rekoodh ah ku iibisay dhammaan tikidhadii ay xilli ciyaareedka ugu talo gashay.
Tikidhadan oo guud ahaan ahaa 52,000 tikidh ayay iibsadeen jamaahiirta oo ah kuwo si buuxda u aaminsan kooxdooda muujiyayna kalsooni dheeri ah oo ay ku qabaan in kooxdoodu mar uun booskeedii kusoo laaban doonto.